नेपालमा कथित सानो जातका महिलाहरूले जबर्जस्ती यौन–श्रमसँगै यौन–हिंसा भोगेका पीडाको जोड, घटाउ र गुणन केही पनि मिल्दैन
काठमाडौँ — हामी जङ्गल न हौँ, जङ्गलमा जसले पनि पिसाब फेर्छन् ।’ सुदूर पश्चिमकी एक अधबैँसे दिदीको भनाइले मलाई अरिङ्गालले टोकेझैँ हुन्छ, घरीघरी रन्थनिन्छु । उनी अनुभूतिको भाषामा भन्छिन्, ‘ऊ… त्यो बगरजस्तै छ मेरो जिन्दगी… सुक्खा र उराठ ।’
उनका अस्थिर र चनाखा आँखा नियाल्छु, रङ्ग उडेको जिन्दगीको कथा । अनगिन्ती संघर्षका पत्रैपत्रको जीवन सम्झिँदै उनी कथा हाल्छिन्, ‘आँखा बन्द गर्छु रात पर्छ । न मलाई दिन मन पर्छ, न रात नै । मलाई के मन पर्छ, भुलिसकेँ !’
उनी आफ्नो कुरोको बिट मार्दै भन्छिन्, ‘तिनै राणाहरू, राजा रजौटाहरूले पातर्नी बनाई गाउँदा नाच्दा हाँस्नुपर्‍यो । पछि त्यही हाँसो नै विष भयो । कस्तो अनौठो !हाँसो पनि अरूको अधीनमा ।’
नेपालमा कथित सानो जातका महिलाहरूले जबर्जस्ती यौन–श्रमसँगै यौन–हिंसा भोगेका पीडाको जोड, घटाउ र गुणन केही पनि मिल्दैन । किनभने ‘नेपाली समाजमा दलित महिलाको सतीत्वको प्रश्न नै हुँदैन र दलित महिलाको व्यक्तित्व क्षत्री–बाहुनका लागि केही होइन’ भन्ने मान्यता छ । कथित उच्च जातले दलित महिलाविरुद्धको यौन आक्रमणलाई अपराधै मान्दैन । सामाजिक संरचनाले अप्रत्यक्ष रूपमा दलित महिलाविरुद्धको यौनहिंसालाई छुट दिन्छ । किनकि उनीहरूविरुद्ध हुने यौनहिंसालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत बेवास्ता गर्छ भनी लेख्छन् अपराधशास्त्रका विज्ञ युवराज संग्रौला ।
दलित महिलाको शरीरलाई सोस्ने र उनीहरूको योनिकतालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी इतिहासको दुष्चक्र त झनै घना जंगलजस्तै रहेछ । यो दुष्चक्रको इतिहास बुझ्न ‘श्री ३ जंगले डोटीका पार्तनी देउचेलीहरूलाई निगाह गरी केही व्यवस्था थिति बाँधी इनाम समेत गरिदिएको पत्र’ एउटा कामलाग्दो दसी हो । त्यसबारे इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल ‘नेपाल निरुक्त’ मा लेख्छन्, ‘मानिसहरू स्वास्नी तुल्याउँछु भन्दै झुक्याएर देउचेलीहरूसँग केही काल रामरौस मोजमज्जा गर्ने र छाडिदिने, बिनापैसा जबर्जस्ती करणी गर्ने गर्दथे ।’ त्यति मात्रै नभई उनीहरूको नाचगानलाई शत्रुको भेद खोल्न १९१२ सालको गोर्खा–भोट युद्धको बेला रणनीतिक रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । उनको अध्ययनले भन्छ, डोटीतिरका ‘देउचेली पातर्नी’ राम्री छ भने केही केहीलाई त राजधानी काठमाडौँसम्म झिकाइन्थ्यो भने भारत र भोटतिर पनि नेपाली केटीहरूलाई बेचिन्थ्यो, राज्य स्तरबाटै ।
सांस्कृतिक इतिहासकार प्रयागराज शर्माका अनुसार ‘न्यायविकासिनी’ भनेको जात–जातले गर्ने विधि व्यवहारलाई कानुनी मर्यादाभित्र बाँध्ने पहिलो राज्यस्तरीय प्रयास थियो । यद्यपि नेपालमा त्योभन्दा अघि पनि जातभात र छोइछिटो हुने गरेको थियो, नियम बनाउने प्रयास पनि भएको थियो । जयस्थिति मल्लभन्दा अघि पनि जातभात र छोइछिटो प्रथालाई धर्मको नाममा नियममा ढालिएको थियो । राजा–महाराजाहरूका लागि जातभात र छोइछिटो गर्नु नै न्याय र धर्म गर्नु थियो । त्यसबाट सबैभन्दा बेसी त अछुत महिला र उनीहरूको शरीरले न्यायभन्दा सजाय भोगेको पाइन्छ । त्यसको नीलडाम देखिन्छ ती महिलाका शरीरमा । सुदूरपश्चिमकी दिदीका शब्दमा पनि त्यस पीडाकै चीत्कार सुनिन्छ ।
छुवाछुत नै धर्मा्धिकारीको धर्म र कानुन
यात्रामा देखेकी ती दिदीका आँखाले अझै पनि हेरिरहेझैँ लाग्छ । उनका आँखामा आशंका र आत्मविश्वास बलियोसँग झल्किन्छन् । हो, अनौठो किसिमको हेराइ । भिन्नै किसिम आँखाको घुमाइ । उनका आँखाको घुमाइसँगै नेपालको कानुनी इतिहास घुमेको देख्छु । जति सुन्दर नेपाल, त्यति नै निर्मम कानुनी इतिहास । किनभने कसुरदाताको जात हेरी सजाय दिइने कानुनी परम्परा नै यसको मुख्य दसी हो । अझै नाभि कुरो जातीय कानुन भङ्ग गर्नेलाई दिइने दण्डको आम्दानी नै राज्यले छानेका धर्मा्धिकारीहरूको नियमित आम्दानी हुने गथ्र्यो । यस्तै तथ्य छन् नेपालका एक कानुनविदले इतिहासकार ब्रायन हड्सनलाई दिएको जवाफमा ।
मुलुकी ऐनसँगै अन्य थितिले बाँधेको धर्म र धर्मा्धिकारीको व्यवस्थाले संकेत गर्छन् स् जति अछुतलाई अपराधी बनाइन्छ, त्यति नै बढी छुतहरूको आम्दानी बढ्दै जान्छ । अच्चम त के छ भने अछुतहरूलाई अपराधी बनाइरहँदा छुतहरूको समृद्धि निश्चित हुँदै जाने रहेछ । कानुनी इतिहास हेर्दा दलितहरूको सन्तान–दरसन्तानको लासमाथि नेपालको न्यायनिसाफका खाँबा गाडिएको देखिन्छ । ती खाँबा थिए राज्यबाट छानिने डिठ्ठा, विचारी र धर्मा्धिकारी । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको अध्ययनमा ‘धर्मा्धिकारीहरू भनेको राजाद्वारा नियुक्त ब्राह्मण हुन्थे । उनीहरूको कत्र्तव्य र अधिकार भनेको भातपानी, सम्प्रदाय र यौन सम्बन्धबारे धर्म–अधर्म छुट्याउनु हो ।’ आखिर किन भातपानी, सम्प्रदाय र यौन सम्बन्धमा धर्म–अधर्म छुट्याउनुपर्‍यो त ? किनभने, मानिसको दैनिक जीवनमा यी तीनवटै विषयको मुख्य भूमिका हुन्छ । तिनमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै कतै शक्ति–सम्बन्धमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजिएको त होइन ?
राज्य चलाउनेहरूको नजरमा धर्म र कानुन भनेको के हो? यसको परिभाषा धर्मले अछुत मानेका रैतीको आँखामा पढ्न पाइन्छ । निश्चित जातमा जन्मिएकै कारण कसैले शास्त्र पढ्न पाउने, शास्त्रलाई अथ्र्याउन पाउने, न्याय–अन्यायको परिभाषा गर्न पाउने र त्यही धर्मशास्त्रलाई आधार मानेर जातअनुसार न्याय–अन्याय छुटयाउने । जातकै आधारमा कोही न्यायमूर्ति हुने र कोही अपराधीे । पहिलेदेखि नै रहेछ धर्मरकानुन र धर्मा्धिकारीको पनि आरक्षण † हठात् सम्झिन्छु, अहिले पनि कानुन पढाइने कक्षाकोठामा साथीले बेन्ची नपाउँदा भन्छन्, ‘हैन, यो बेन्चमा आरक्षण छैन ?’ मनमा प्रश्न जन्मिन्छ, ‘साँच्चै पहिले होस् कि अहिले, आरक्षण कसले पाउँदै आएको रहेछ त ?’
ब्राह्मणहरूलाई आरक्षित गरिएको थियो धर्मा्धिकारी पद । इटालीका अध्येता लुसियानो पेटेकको अध्ययनमा धर्मा्धिकारी शब्दको उल्लेख आजभन्दा साढे सात सय वर्षअघि नै भएको पाइन्छ । नेपाल संवत् ३९५ को ‘दिव्यशुद्धिप्रकरण’ को पुष्पिकावाक्यमा ब्राह्मण जसब्रह्मालाई लिएर यसको प्रयोग गरिएको रहेछ । उनीहरूले न्याय–अन्याय छुट्याउने नाममा छुत–अछुतको धारणालाई नै मुख्य मापदण्ड बनाउने गर्दथे । त्यसको सबैभन्दा नराम्ररी सिकार त शूद्र, अछुत वा मासिन्या काटिन्या जात नै हुने भए ।
मानिसलाई शूद्र, अछुत वा मासिन्या काटिन्या जात बनाउनुलाई नै धर्म मान्ने धर्मा्धिकारीहरूले महिलाको गर्भलाई नै अछुत र बिटुलो बनाउँदै आएका थिए । त्यस्ता धर्मा्धिकारीले लिएको ‘दिव्य परीक्षा’ कसरी न्यायिक हुन सक्छ ? छुवाछुतलाई नै धर्म मान्ने धर्मशास्त्र र धर्मा्धिकारीले अछुतहरूलाई न्याय दिन्छ, कसरी ? नेपालको हिन्दु राज्यले पनि धर्म, कानुन, शास्त्र र धर्मा्धिकारीको व्यवस्था गरी अन्यायलाई नै संस्थागत गर्दै आएको त होइन ?
यसको जवाफमा सांस्कृतिक इतिहासकार प्रयागराज शर्माको ठोकुवा छ, ‘हिन्दु राज्यले एउटा धार्मिकरसैद्धान्तिक पूर्वाग्रह राखेको हुन्छ । त्यो पूर्वाग्रह हो समाजलाई राज्यद्वारा निर्दे्शित आदर्शको पालना गराउनु । हिन्दु न्याय–पद्धति (जुरिस्प्रुडेन्स) लाई धर्मशास्त्रीय भावनाले सदा आविर्भूत गरेको तथ्य यतैबाट सिद्ध हुन्छ ।’
मेरो विचारमा यस्तो पूर्वाग्रह भातपानी र यौन सम्बन्धमा झनै जब्बर देखिन्छ । हिन्दु राज्यमा ब्राह्मणले शूद्र समुदायका महिलामाथि यौन अपराध गरेमा न्यूनतम सजाय दिइन्थ्यो । शूद्र समुदायको पुरुषले द्विज वर्णको महिलामाथि यौन अपराध थाहा नपाई गरेमा यौन अंग काट्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने काम गरिन्थ्यो । तर थाहा पाई–पाई अपराध गरेमा उसको ज्यान समेत लिइन्थ्यो । क्षत्रिय र वैश्यको सम्बन्धमा पनि ब्राह्मण महिलालाई यौन अपराध गरेमा शूद्रलाई जस्तै सजाय दिइन्थ्यो वा जिउँदै जलाइन्थ्यो । यसबारे इतिहासकार तुल्सीराम वैद्य र त्रिरत्न मानन्धरको किताब ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट इन नेपाल’ मा उल्लेख छ ।
धर्मशास्त्र र ऐन–कानुनका किताब पल्टाउँदै बस्दा पनि सुदूरपश्चिमकी अधेबैँसे दिदीका आँखाले पछ्याइरहेझैँ लाग्छ । र, ती अस्थिर आँखाले घरीघरी सोधिरहेझैँ लाग्छ, ती ऐन, कानुन र धर्मशास्त्रले नै सिंगो समुदायलाई अछुत बनाएका होइनन् ? ती ऐन, कानुन र धर्मशास्त्रले अछुत भनिएका महिलाको शरीरलाई थप सोस्न, लुछ्न सघाएका होइनन् ? उनका आँखाका भाखाले मलाई कानुनका कक्षा कोठासम्म पनि लखेटेको लखेटेकै अनुभूति हुन्छ ।
पटक–पटक आफैंलाई सोच्छु, किन हिन्दु विधिशास्त्रलाई आलोचनात्मक ढंगले अध्यापन गराइँदैन ? ठीक–बेठीक, न्याय–अन्याय, विवेक–अविवेक, आलोचनात्मक चेत कानुनको विद्यार्थीको आधारभूत गुण रे, मिसले पहिलो दिनमा विधिशास्त्रको कक्षामा त्यही पढाएकी थिइन् । कण्ठै पार्न नपर्ने हुनाले सधैँ सम्झन्छु । तर हिन्दु विधिशास्त्रको कोर्समा कुन जातको विवेकलाई विवेक भन्छ भन्ने च्याप्टर नै छैन । तर प्रत्येक उपशीर्षक, वाक्य, शब्द र तिनले दिने अर्थमा अव्यक्त ढंगले निश्चित जातको विवेकलाई पवित्र मानी पढाइन्छ, पढिन्छ । यस्तो पढाइ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिकल्पना नहुँदैदेखि जारी रहेछ । यस्तो पढाइले आफूसँगै काम गर्ने न्यायाधीश साथीसँगै बसेर चिया पिउँदा पनि छुइन्छ । अनि छुवाछुत गर्नुलाई सानले आफनो धार्मिक, र सांकृतिक अधिकार ठानिन्छ ।
हिन्दु अधिराज्यमा धर्म नै कानुन, धर्म नै राजनीति, धर्म नै संस्कृति थियो । र, धर्मा्धिकारीहरू नै ‘धर्म–शासन’ का विधिविधान बनाउने, त्यसलाई लागू गर्ने र लागू गर्दै फाइदा पनि लुट्ने राज्यका अंग थिए । मुलुकी ऐनको नाममा चलेको राणा शासन २००७ सालमा अन्त्य भएपछि धर्मा्धिकारी पद पनि हराउँदै गयो । र, धर्म–शासनले प्रजातन्त्रको खोल ओढेपछि धर्मा्धिकारीको ठाउँ न्यायाधीश पदले लिँदै गयो । धर्मले मासिन्या र अछुत बनाएका महिलाहरूको आँखाबाट हेर्दा धर्मा्धिकारी र न्यायाधीशलाई छुटयाउनै मुस्किल होला । किनभने हिजोका धर्मा्धिकारीहरूको
हुन त म पनि पहिले किताबमा मात्रै इतिहास खोज्थेँ । तर इतिहास त वर्तमान पनि रहेछ, विरासतको रूपमा कायम रहने । वर्तमानमा बाँचिरहेका प्रत्येक महिलाका शरीरमा कुँदिएका रहेछन् इतिहास र सत्य । ती दिदीको जिन्दगीमा मात्रै होइन, उनको नजिकै उभिएको हुर्केकी छोरीको जीवनमा पनि देखिन्छ इतिहास र सत्यको कुँदाइ । ज्ञान र शक्तिको राजनीतिक खेलबीचमा राज्यले दिएको बनमारा घारी, वनमारा फाँड्दाफाँड्दै उठेका ठेला, उनका हाडछाला मात्रै बाँकी रहेको ख्याउटे शरीर र अनगिन्ती चट्टानजस्ता प्रश्न बोकेका आँखा नै जिउँदो इतिहास रहेछ, सत्य रहेछ । उनी र उनीजस्तै महिलाका ‘अछुत’ गर्भ नै इतिहासको साक्षीप्रमाण रहेछ ।
१९१० को मुलुकी ऐनलाई नै संशोधन गरी बनाइएको नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी ऐनको संशोधन, २०७४ मा पनि छैन धर्मा्धिकारी प्रथा । पक्कै पनि धर्मा्धिकारी प्रथा इतिहास भइसकेको छ, तर धर्मा्धिकारीका नयाँ–नयाँ स्वरूप भने जिउँदै छन्, जन्मँदै छन् । जसले महिलाको गर्भलाई नै निरन्तर अछुत बनाउँछन्, जसले अछुतहरूलाई नै अपराधी बनाउँछन्, त्यस्ता ‘धर्मा्धिकारी’ ले चलाउने न्यायव्यवस्था कसरी हाम्रो हुन सक्छ ?